Google Analytics रेफरल स्प्याम कसरी हटाउने भनेर सिमानाबाट निर्देशनहरू
रेफरल स्पैम को स्रोत के हो?
उपयुक्त प्रतिक्रिया 'बोट्स' हो। कोडरहरूले बनाएको सन्दर्भ सामाग्रीको लागि इन्कार गर्न र वेब बदल्न को इरादा छ। तथापि, आर्टेम एगगेरियन, वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक सेल्टल्ट बताउँछ कि सबै बटहरू "भयानक" छैनन्। उदाहरणका लागि, Google ले वेब फाइल गर्नको लागि बोटहरू प्रयोग गर्दछ। कुनै पनि मामला मा, भयानक बटहरु तथ्य को प्रकाश मा अत्यधिक चिंतित हो कि उनि एक छोटो अवधि मा यस्तो काम को एक ठूलो मात्रा गर्न सक्छन्।
अर्को प्रकारको स्पाम बट तपाईंको वेबसाइटमा जानुहोस्। तिनीहरूले आफ्नो साइट फाइल गर्न वा अनौठो कुरा पूरा गर्न नकली रेकर्डहरू सेट अप गर्न सक्छन् वा उनीहरूले पत्ता लगाउन छोडेनन्। यो तपाईंको जोखिम को लागी खतरनाक छ किनकी तपाईंको साइट को लागि विनाशकारी हुन सक्छ र आफ्नो सुरक्षा लाई पनि स्नुप।
त्यसैले के हो?
सौभाग्य देखि, Google लाई थाहा छ कि यो विश्लेषणात्मक मा पाया स्पैम बटहरुको लागि विश्वव्यापी उत्तर को जांच को छ।
गोद लेने को लागी एक तरीका 'च्यानल ज्ञात बोट्स र एरनिक्स' चेकबक्स मा क्लिक गर्नुहोस।
बाँकीको निषेध गर्न, तपाईंले च्यानलसँग फरक दृश्य बनाउन आवश्यक छ। एक शक्तिशाली भाग बनाउनुहोस्, र यसले तपाइँलाई तपाइँको जडानसँग सम्बन्धित च्यानललाई पनि जडान गर्ने मौका दिन्छ।
वर्तमानमा तपाईको साइट भ्रमण गर्ने बट्टाहरू निस्क्रिय गर्न, सामान्य 'छाप' खोज्नुहोस्। उदाहरणका लागि, समूह> नवाचार> System Area को समूहमा जानुहोस्, र तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइटहरू जाँदा तपाइँको अतिथिहरूलाई प्रयोग गर्ने क्षमता देख्नेछ।
कुनै पनि अवस्थामा, गैर-मानव ग्राहकहरूले क्लाउड विशेषज्ञ सह-अपहरू र स्तर 1 दूरसंचारका रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। तपाईं त्यस्ता फन्डोनी प्रणाली खाली ठाउँहरू (जस्तै 'गुगलबोट') हेर्नको लागि रून्डाउन क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको साइटमा कुनैपनि लगानीको लगानी गर्दैन।
यसबाहेक मात्र ती व्यक्तिहरूलाई एकदमै बलियो बनाउनुहोस् जुन तुरुन्तै छोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई एक रेजेक्स व्याकरणमा राख्नुहोस्। परिस्थितिको अवस्थामा, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न उत्तम तरिका प्रस्ताव गर्नेछौं।
. Source - dual coil clearomizer innokin iclear30s